सुरुमा याडिया ब्राण्ड रोज्ने १५ ग्राहकलाई रु. २५ हजार छुट प्रदान गरिने छ । यो योजनाबाट हाम्रा ३ वटै मोडलका पहिलो १५ ग्राहक गरेर कुल ४५ ग्राहकले नगद छुट पाउनेछ ।
विश्वकै सर्वाधिक सफल इलेक्ट्रीक दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन निर्माता कम्पनी याडियाका स्कुटर नेपाली बजारमा उपलब्ध भएको छ । याडिया ब्राण्डका प्रिमियम स्कुटर कुजु नेपाल प्रा.लि. ले नेपालमा विक्री सुरु गरेको हो ।
याडिकाको युरोपियन स्ट्यान्डर्डका नेपाली बजार सुहाउँदो उत्कृष्ट स्कुटर नेपाली बजारमा ल्याएको जानकारी गराउन चाहन्छौं । अहिले याडियाका ‘जी फाइभ, सि वान एस र एस–लाइक’ तीन मोडल हाम्रो टंगालमा रहेको सुविधा सम्पन्न शोरुमबाट ग्राहकले खरिद गर्न सक्नेछ ।
१. जी ५
यसमा ७ इन्चको डिजिटल इन्स्टुमेन्ट क्लस्टर रहेको छ । यसको फ्रन्ट फर्क उच्च गुणस्तरको आल्मुनियमद्धारा निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै १२ इन्चको ट्युवलेस टायर, दुबै चक्कामा डिस्क ब्रेक र सबै प्रकारका लाइहरु एलइडी प्रयोग गरिएको छ । यसमा २६ लिटरको स्टोरेज क्षमता पाउन सकिन्छ ।
यसको मूल्य ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
२. सि १एस
यसमा ६० भोल्ट, ३२ एम्पीयरको पानाशोनिक लिथियम आयोन व्याट्री प्याक उपलब्ध छ । यसालाई फुल चार्ज गर्न ६ घन्टा समय लाग्छ । यसले एक पटकको फुल चार्जमा ८० किलोमिटर रेन्ज प्रदान गर्छ । यो ब्याट्रीको लाइफ सर्कल ८०० रहेको छ । यस्तै यो व्याट्री माइनस २० देखी ५५ डिग्रिसेन्टीग्रेट तापक्रममा काम गर्न सक्छ । यसमा ९ प्रकारको सेफ्टी प्रोटेक्सन रहेको छ । यसमा सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन, ओभर करेन्ट प्रोटेक्सन, ओभर चार्ज प्रोटेक्सन, ओभर डिस्र्चाज प्रोटेक्सन, प्रि डिस्र्चाज प्रोटेक्सन, सन्तुलित फक्शन, ओभर टेम्प्रेचर प्रोटेक्सन, राइडिङ मोडजस्ता फिचर रहेको छ ।
यसमा ५ इन्जको डिजिटल इन्स्टुमेन्ट क्लस्टर रहेको छ । त्यस्तै यसमा स्मार्ट कि–लेस इन्टिग्रेटेड शोलुसन सिस्टम रहेको छ । यसको फर्क उच्च गुणस्तरको आल्मुनियम द्धारा निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै १२ इन्चको ट्युवलेस टायर, दुबैतर्फ डिस्क ब्रेक, २५ लिटरको स्टोरेज क्षमता रहेको छ ।
याडिया एस–लाइकमा ४.२ इन्जको डिजिटल इन्स्टुमेन्ट क्लस्टर रहेको छ । यसमा रहेको एलसीडी डिस्प्ले दिनमा तथा रातमा आफै एड्जष्ट हुनेछ । यसको फर्क उच्च गुणस्तरको आल्मुनियम द्धारा निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै यसमा १२ इन्चको ट्युवलेस टायरको प्रयोग गरिएको छ भने यसको फ्रन्टमा डिस्क र रियरमा ड्रम ब्रेक उपलब्ध छ । यसमा १८ लिटरको स्टोरेज क्षमता रहेको छ ।
यसको मूल्य २ लाख ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।